Shirkad Kaluumaysi oo Maydh Somaliland laga hirgalinaayo laguna qiyaasay in ay 5 milyan oo Dollar ku kici doonto. | Salaan Media
Shirkad Kaluumaysi oo Maydh Somaliland laga hirgalinaayo laguna qiyaasay in ay 5 milyan oo Dollar ku kici doonto.
Kulan aad u balaadhan oo ka dhacay Bariga magaaladda London maalintii Sabtida 29.6.13 laguna daah-furaayey shirkad lamagac baxday PONTUS MARINE LIMITED oo warshad kaluunka ah ka hirgalinaysa Maydh,kulankaas oo uu daadihinaayey Cabdiraxmaan Cawil, waxa ugu horeyn lagu furay Aayado Quraana,kadibna intii aan barmaamijka loo galin waxa hadalo isugu jira sharikada iyo muhiimada ay leedahay soo jeediyey odayaal reer Somaliland ah oo kulanka kasoo qaybgalay aadna madahnaq ugu soo jeediyey Maalqabeen Maxamed Yuusuf fikirkan wacan ee uu keenay iyo dhamaan dadka hawsha la wada oo dhan.Waxa kale oo ay carabaabeen in ay tahay fursad qaali ah oo dhamaan shacabka reer Somaliland ka faa’ideysan donaan. sharikadani waxa ay tahay shirkad ganacsi una furan dadka reer Somaliland inay ka qayb qataan ayaad hadaladoodii ka mid ahaa.
Pontus Marine Limited oo hab ganacsigeedu uu yahay mid qayb ama (Share) laga gali karo ah; ayaa shalay lagu soo bandhigay xaflad ka dhacday hool ka yaala Jaamacada Queen Mary oo ku yaala Bariga Caasimada London. Xog-hayaha shirkada Pontus Marine Limited oo sharaxaad ka bixiyey waxa uu soo bandhigay Mr Maxamed Yuusuf oo hore u lahaa Shirkada Invicta Capital Limited ayaa sheegay in shirkadan cusub ay timid kadib hawlgalo baadhitaan ah oo lasameeyey taaso muujisay in ay jirto fursad ah in wax soosaarka kaluumaysiga ee dhanka “dekedda Maydh ee Sanaag ku taala iyo dekedda Barbara oo ku taala gobolka Saaxil ee Jamhuuriyada Soomaaliland” uu yahay mid midho dhalin kara.
Shirkada ayaa hawlgalkeeda kowaad ka bilaabi doonta dekedda Maydh ee gobolka Sanaag iyada oo shirkadu ay isticmaalayso dakad ku sii meel gaadh ah oo nooca biyaha dul sabeeya (Pontoon) inta la wado hawshay dayactirka dekedda rasmiga ah ee Maydh. Mudane Maxamed Yuusuf ayaa isagoo ka hadlaya fursadan cusub ayaa yidhi “ In kasta oo ay hada businesskan cusub uu saldhig ku leeyahay Jamhuuriyada Soomaaliland, wuxuu mustaqbalka u sii talaabi doona xeeba kale ee dalka Soomaaliya”.
Shirkada ayaa go’aansatay in ay kalumaysiga ka bilowdo gacanka Caden (Gulf of Aden) oo ay labad dakadood ee Maydh iyo Barbara ay ku yaalaan; sababta oo ah biyaha gobolkaas ama gacankaa ayaa aad qani ugu ah cayayaanka badda ee lagu magaacbo phytoplankton iyo zooplankton oo labada noocba ay u yihiin quud ama raashin u ah kaluunka taasoo soo jiidaysa ama hoy u noqonaysa ilaa iyo 600 oo nooc oo Kaluunka ah; siiba tiro aad u saraysa oo ah kuwa ah aadka u qiimo badan sida kaluunada loo yaqaan (Tuna, Lobster, Cuttlefish, Shirimps, Sharks) iyo qaar kale oo badan.kuwaas oo aad aduunka looga jecel yahay qaalina ah.
Shirkada ayaa fidinaysa fursad ay mujtamaca reer Soomaaliland ay ku iibsanayaan sheerer midkiiba share uu yahay $1 oo maraykan ah iyada oo aan xad lahayn intii share uu qof waliba iibsanayo ilaa laga gaadho xadka oo 5 malyuun oo dollarka maraykanka ah. Qaadashada sheerarkan ayaa ku salaysan sidii loogu soo kala hor maro “First Come, First Serve” taaso macnaheedu uu yahay in dadka ku soo horeeya qaadashada ama iibsashada sheerarkani ay helayaan sheerarka ugu tayada wanaagsan marka la eego inta share ee ay rabaan. Shirkada ayaa saadaalinayasa in ay ka faa’idadeeda helayso sanadka labaad ee la aasaasay sababtoo ah sanadka kowaad waa inta ay shirkadu ku howlgalayso sidii ay saldhig uga samaysan lahayd Soomaaliland iyo sidii ay u dhisi lahayd dhismaha ay ka howl gali lahayd iyo soo qaadashada talaagado noocayada warshadaha iyo wixii qalab ah ee asaasiga ama muhiim u ah ganacsiga sida gaadiidka culus (Vans, Trucks) iyo bakhaarada (Warehouses) kuwa talaagadaha leh oo gabi ahaan ay shirkadu diyaarsanayso. Dekedda Barbara ayaa noqonaysaa xarunta doofinta khayraadka badda wixii qalab ah ee hawshan caawinayana ayaa la hir galinayaa sanakan kowaad.
ka ganacsiga Khayraadka Badda ayaa marka hore la beegsanayaa macaamiisha reer Soomaaliland, marka labaadna waxaa losii gudbayaa dalka Ethiopia oo dadkiisu gadhaayo ilaa 85 malyuun oo qof. Ethiopia ayaa ku balan qaaday inay siiso rukhsada soo dhoofinta shirkada taaso dhiiri galinaysa ganacsigan lakinse Ethiopia ma maal galinayso shirkadan. Suuqyada kale ee shirkadan ayaa ah Wadanka Isu taga Imaaraadka Carabta (UAE), Sucuudi Careebiya, Shiinaha marka ay si wacan u hir gasho.
Codsiga maal gashiga ayaa ku eg 30ka bisha October ee sanadkan 2013, maalinta uu xidhmayo Shareku waa 31ka bisha October ee 2013.
Wixii faahfahin ee dheeraad ah kala soo xidhiidh:
Pontus Marine Limited
33, St Jame’s Square,
Mr . Mohamed Yusuf , the executive director of Pontus and Invicta presents the business programme of the project
Queen Mary University Campus – East London
FADLAN LASOCO VIDEO KU SAABSAN KULANKA INSHA ALLAH.